Tsy mandeha ny mpandahateny iPhone? Ity ny The Real Fix! - Iphone
iTunes tsy afaka mamantatra iphone 6
fitbit dia tsy hifandray amin'ny Bluetooth
sary niraikitra tamin'ny fiandrasana fampahavitrihana
ny fomba fikarohana apps amin'ny iphone
Rehefa mijanona tsy miasa ny mpandahateny an'ny iPhone, dia toy izany koa ny endri-javatra maro izay mahatonga ny iPhone ho lehibe tokoa. Mijanona tsy milalao intsony ny mozika, tsy afaka manao antso amin'ny alàlan'ny telefaona fitenenana ianao, ary tsy mandre 'ding' ianao rehefa mahazo hafatra an-tsoratra na mailaka, na angamba tsy voadona ny mpandahateny iPhone anao. Zavatra tokana azo antoka: mampiasa ny mpandahateny anao ny iPhone-nao betsaka . Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho inona no hatao rehefa tsy mandeha ny mpandahateny iPhone azonao atao alamino tsara ny olana .
Tapaka ve ny mpandahateny iPhone ahy?
Amin'ity fotoana ity dia tsy fantatsika tsotra izao. Vaky ary tsy miasa dia zavatra roa samy hafa. Tokony hiezaka ny hanao fitsapana mpandahateny iPhone ianao raha te hahita raha tsy misy feo hivoaka amin'ny telefaoninao mihitsy na feo vitsivitsy fotsiny. Hizaha toetra ny feon-tsarimihetsikao, ny feon'ny haino aman-jery ary zahao raha tsy mandeha ny mpandahateny iPhone anao mandritra ny antso.
Mamantatra NAHOANA tsy mandeha ny mpandahateny iPhone anao, ilaina ny mahatakatra ireo zavatra roa mitranga isaky ny mamoaka feo ny iPhone:
Rindrambaiko: Ny rindrambaiko ny iPhone anao dia manapa-kevitra hoe inona no feo hilalao ary rahoviana no hilalaovana azy.
Hardware: Ny mpandahateny voaorina ao amin'ny faran'ny iPhone dia mamadika ny torolàlan'ny rindrambaiko ho onjam-peo henonao.
Inona no mahatonga ny mpandahateny iPhone hijanona tsy hiasa?
Raha tsy mandeha amin'ny laoniny ilay rindrambaiko dia mety tsy mandefa ireo fambara tokony ho an'ny mpandahateny ny iPhone, ka tsy mandeha mihitsy ilay mpandahateny na voafitaka ny mpandahateny iPhone anao. Ity ny vaovao tsara: Ny ankamaroan'ny olan'ny rindrambaiko dia azo alamina ao an-trano . Mampalahelo fa tantara hafa ny fampitaovana.
Ny mpandahateny iPhone dia iray amin'ireo singa mora tohina indrindra amin'ny iPhones. Ireo mpandahateny dia manao onjan'ny feo rehefa misy fitaovana manify manetsiketsika haingana dia haingana. Raha simba ilay fitaovana misy fomba, ny mpandahateny iPhone anao dia afaka mijanona tsy miasa manontolo, manomboka manamboatra tabataba na manao ny Voaroaka ny mpandahateny iPhone.
foana andramo ny manamboatra ny rindrambaiko an'ny iPhone alohan'ny hisolo ny mpandahateny mihitsy. Malalaka ny manamboatra rindrambaiko ary tsy ny mpandahateny, fa tsy izany ihany no antony. Raha misy dia olan'ny rindrambaiko, azontsika natao ny nanolo ny mpandahateny hatrany hatrany ary mbola tsy nilalao feo ny iPhone.
Izany dia mitranga mandrakariva amin'ireo olona izay manolo ny batterie iPhone azy ary gaga rehefa mandeha haingana toy ny haingana ny bateriny haingana kokoa aza . Taty aoriana dia tonga saina izy ireo ny olana mandeha amin'ny bateria dia nateraky ny lozisialy hatrizay.
Ahoana ny fomba hamahana ireo olan'ny mpandahateny iPhone
1. Alao antoka fa tsy mangina ny iPhone anao
Mitranga foana izany. Mpanjifa iray tonga ao amin'ny Apple Store ary manamboatra ny olana izahay amin'ny alàlan'ny fanodinana ny habetsahana ary ny famadihana ny jiro mangina mankany amin'ny toeran'ny 'Ring'. Zahao ny lahatsoratro antsoina hoe Tsy miantso ny iPhone-ko raha miteny ny mpandahateny anao SASANY feo fa tsy miantso rehefa mahazo antso an-tariby.
2. Hamarino tsara fa miakatra hatrany ny volume
Mora ny mamadika tampoka ny volanao hatrany amin'ny iPhone-nao na mamadika ilay switch tsy miteny raha mampiasa tranga lehibe sy lehibe ianao. Vohay ny iPhone-nao ary tazomy ny bokotra miakatra mandra-pihodin'ny iPhone-nao rehetra ny lalana miakatra. Niara-niasa tamin'ny mpanjifa aho izay nilaza hoe: “Oh! Nanontany tena aho hoe aiza ireo bokotra volume!
Raha tsy miakatra ny volume na dia mitazona ny bokotra ambony aza ianao, sokafy ny fampiharana Settings ary tap Feo & Haptics . Hamarino tsara fa eo akaiky eo ny switch Miova amin'ny Buttons dia velomina (ho hitanao fa rehefa maintso izy io).
Raha mamadika ny feo hatrany ianao ka maheno feo milamina mangina tokoa dia simba ny mpandahateny anao. Mandehana mankany amin'ny dingana farany farany hahafantarana ny safidy fanamboarana nataonao.
inona ny fomba fanarenana amin'ny iphone
3. Hamarino tsara fa tsy mifikitra amin'ny lohahevitra findainao ny iPhone
Rehefa mifandray amin'ny iPhone ny headphones dia mandeha amin'ny headphones daholo ny feo fa tsy ilay mpandahateny. Ity ny ampahany sarotra: Raha ny iPhone-nao mihevi-tena ho ampidirina an-telefaona fa tsy izany, manandrana mitendry feo amin'ny alàlan'ny headphone ny iPhone-nao tsy eo izany .
Matetika izany dia mitranga rehefa misy sombin-javatra potipoti-javatra na ranon-javatra kely miditra ao anaty satrok-doha ary manao «adala» ny iPhone mieritreritra fakan-tsarimihetsika tafiditra ao. Raha hitanao écouteur eo ambanin'ilay slider volume rehefa ahodina na midina ny volume dia zahao ny lahatsoratro maninona ny iPhones no miraikitra amin'ny maody finday hahitana ny fomba fanamboarana azy.
4. Ataovy azo antoka fa tsy milalao any amin'ny toerana hafa ny feo (Eny, Ity afaka Nitranga)
Ny iPhones dia mifandray indray ary milalao feo amin'ny alàlan'ny mpandahateny Bluetooth, Apple TV, ary fitaovana hafa raha vantany vao tonga eo amin'ny elanelany. Indraindray tsy tsapan'ny olona fa milalao feo amin'ny alàlan'ny fitaovana hafa ao an-tranony na amin'ny fiarany ny iPhone. Ireto misy ohatra roa momba ny fomba hitrangan'izany:
Manana Apple TV ianao izay mifamatotra amin'ny fahitalavitrao. Tamin'ny fotoana taloha dia nampiasainao ianao AirPlay mitendry mozika amin'ny alàlan'ny mpandahateny amin'ny fahitalavitra anao. Rehefa mody ianao dia mifandray indray amin'ny Apple TV ny iPhone ary manohy mandefa mozika ao aminy - fa ny TV sy ireo mpandahateny dia maty.
Headset Bluetooth no ampiasainao ao anaty fiara. Rehefa miditra ao an-trano ianao dia mijanona tampoka ny mpandahateny iPhone anao sa ahoana? Raha ny tena izy dia mbola milalao feo amin'ny alàlan'ny headset Bluetooth ny iPhone satria hadinonao ny namono azy. (Tandremo koa ireo mpandahateny Bluetooth!)
Mba hahazoana antoka fa tsy milalao mozika any an-toeran-kafa ny iPhone dia honoinay ny Bluetooth, hiala amin'ny fitaovana AirPlay (toy ny Apple TV), ary manandrana mitendry feo indray. Azonao atao ny manatanteraka ny fampiasana roa Ivotoerana fanaraha-maso amin'ny iPhone-nao.
Raha te hampihetsika ny foibe fanaraha-maso dia ampiasao ny rantsan-tànanao mba hikorisa ambony ambany amin'ny efijery. Tsindrio ny kisary Bluetooth (ao anaty boaty eo amin'ny zoro ambony havia amin'ny Control Center) hamonoana ny Bluetooth.
Ahoana ny fomba hamerenana ny fampiharana mailaka amin'ny iphone
Manaraka, tsindrio ary tazomy ny ivon-mozika eo amin'ny zorony ambony ankavanan'ny Control Center ary kitiho ny kisary AirPlay. Hamarino tsara fa misy marika kely fotsiny eo akaikiny iPhone . Raha manomboka miasa indray ny mpandahateny anao dia nanamboatra ny iPhone-nao ianao ary nahita ny anton'ilay olana.
5. Avereno ny iPhone
Iray ihany ny fomba tena azo antoka tapaka ny mpandahateny anao, ary izany dia hamerenana amin'ny laoniny ny iPhone. Avereno aloha ny iPhone-nao, avy eo araho ny torolalako ao amin'ny lahatsoratro momba izany Ahoana ny fomba hamerenan'ny DFU iPhone , ary miverena eto rehefa vita ianao.
Aorian'ny famerenana amin'ny laoniny dia ho fantatrao avy hatrany raha voavaha ny olana. Hamarino tsara fa tsy amin'ny maody mangina ny iPhone (jereo ny dingana 1) ary miakatra hatrany ny volanao (jereo ny dingana 2). Tokony handre kitendry fitendry ianao raha vantany vao manomboka manoratra ny tenimiafinao Wi-Fi na Apple ID ao anatin'ny fizotran'ny fananganana.
Raha mbola tsy maheno na inona na inona ianao na mbola voafehy ny mpandahateny iPhone dia nesorinay ny fahafahan'ny rindranasan'ny iPhone naterak'ity olana ity, ary indrisy, midika izany fa tapaka ny mpandahateny iPhone anao. Fa aza kivy - misy safidy tsara azo atao amin'ny fanamboarana mpandahateny iPhone.
6. Amboary ny iPhone Speaker
Raha tapaka ny mpandahateny iPhone anao na mimonomonona ny mpandahateny iPhone anao na tsy mandeha mandritra ny antso dia ny vaovao tsara dia ny Apple no soloina ireo mpandahateny iPhone na amin'ny Genius Bar na amin'ny alàlan'ny serivisy fanamboarana mailaka ao tranokalan'ny mpanohana azy ireo .
Misy ihany koa ny safidy hafa tsy lafo: ny iray amin'ireo ankafizinay dia hanin-kotrana , serivisy fanamboarana iPhone izay hihaona aminao amin'ny toerana iray safidinao ao anatin'ny 60 minitra ary manamboatra ny iPhone eo an-toerana. Puls dia manolotra antoka ihany koa mandritra ny androm-piainany. Raha mandeha amin'ny làlan'ny Apple Store ianao dia alao antoka fa manamboatra fotoana ianao aloha, satria afaka mahazo izy ireo tena be asa!
iPhone, maheno anao aho!
Amin'io fotoana io dia efa nanamboatra ny rindrambaiko iPhone na nanapa-kevitra izahay fa tsy mandeha ny mpandahateny iPhone anao noho ny olana momba ny fitaovana ary fantatrao ny fomba fanamboarana ny iPhone. Raha manam-potoana ianao dia zarao ny fomba nahitanao voalohany fa tsy mandeha ny mpandahateny iPhone anao ary ny fanamboarana izay nety ho anao tao amin'ny faritra fanehoan-kevitra etsy ambany-izay hanampy ireo olona hafa manana olana mitovy amin'izany